Health – Somali Mail
Waxaan aaminsanahay inuusan jirin qof dafiri kara faa’idada ay leedahay biyaha caadiga ah oo si joogta ah loo cabo, hasa yeeshee waxaa jira dad badan oo inaga mid ah oon cabin biyo kufilan maalin walbo. Maadaama aanan la joogteyn cabidda biyaha waxaan si joogta ah u dhaawacnaa jirkeena, hadii aad…
Maxaad ka taqaan Waxtarka Liin Dhanaanta (Maqaal)
SM Staff March 29, 2018
Geed Miroodyada la manaafacaadsado waxaa ka mid ah liin dhanaanta oo waxtar weyn u leh Dadka, marka waa maxay Liin dhanaantu?, Liin dhaanaantu waa miro ka mid ah khudaarta oo ka tirsan qoyska liinta. Liin dhanaantu waxay caan ku tahay dhadhankeeda dhanaanka ah iyo biyaha asiidh badan ee laga helo…
Qiyaas xalay waxaad seexatay xilli dambe. Waxaad hurdada kasoo toostay adigoo aad usii raba hurdada, waxaad go’aansatay inaad seexatid caawa waqti hore si aad usoo gudid hurdada, waxaa laga yaabaa inaad amintid hadii aad ku dartid hurdada waqti dheeri ah inaad soo tooseysid maalinta xigta adigoo faxfax ah. Hurdo badan…
Wax ka baro 10 Shey Oo Dhawac Gaarsiin Kara Kiliyahadda, Kuwaasoo Soomaalidu u Badan Tahay
Somali Mail March 3, 2018
Markaste Waxaa Jira Wax yaabo dhaawaca Caafimaadka Qofka Kuwaasoo Noocyo kalu duwan ku yimaada Maantana Waxaan ka hadlaynaa 10 Shay oo dhaawac Gaarsiin kara Kilyahaaga 1-Kaadida ha isku celin hadii aad kaadida isku celisid waxay qatar u tahay kiliyahadda waxaana ku beermaya dhagaxan. 2- Biyo yarida uma fiicno kiliyaha waayo…
Maxaad ka taqaana Infekshanka H pylori oo mid ka ah wax yaabaha sababa gaastriiga, sidoo kalana keena khataro waawayn oo halis galin kara caafimaad kaaga?
Somali Mail February 17, 2018
Infekshanka H.pylori wuxuu dhacaa marka noocyo geermis ah ama bakteeriyo ah oo loo yaqaan Helicopter pylori ay ku dhalato caloosha. Waxayna arintaan badanaa dhacdaa xilliga caruurnimada. Caabuqa ay sababto h.pylori wuxuu sababaa xanuunka loo yaqaan boog calooleedka, ama boogta xiidmaha iyo boogta caloosha oo soomaalidu u taqaan gaas. Dadka badankoodu…
Xaniinyo duubad waa xaalad halis oo degdeg ah waxeyna ubaahantahay wax kaqabasho si loobadbaadiyo xaniinyaha raggu isku laablaabmo sigaar ah xididda dhiigga qaada iyo xariga loo yaqaano spermatic cord, xaaladdaan waxey leedahay xanuun daran iyo barar. Isku duubanka xiniinta waxa ay hakinaysaa qulqulka dhiigga soo gaara xaniinyaha taas oo horseedaysa in…
Goonjabku waa nooc gaar ah oo kamid ah madax xanuunada. Bukaaanada la il daran Goonjabka waxa ay isku arkaan Madax xanuun kusoo laalaabto Dhowr sano. Goonjabku waxa uu lagaar yahay qaabka uu qofku u dareemo madax xanuunka oo ah garaac ama xidid ku bood boodayo oo kale, waxaana lasocon karo…